QANDALA: Dekadda Magaalada Bosaaso oo lagu soo bandhigay hub fara badan oo laga soo qabtay degmada Qandala(Sawiro). – Taleex Media Online Edition: International | Home
Published On: 19 October 2012 4:48 pm Wararka | By taleeh QANDALA: Dekadda Magaalada Bosaaso oo lagu soo bandhigay hub fara badan oo laga soo qabtay degmada Qandala(Sawiro).
Qandala: (pp)- Hawlgal ay ciidamada Badda dawlada Puntland ka sameeyeen degaanka qandala ee Gobalka bari ayey waxay ku soo qabteen hub aad u tira badan,Hubakan oo xalay lasoo gaarsiisayey marsada caalamiga ah ee Magaalada Bosaaso ayaa waxaa saxaafada uga warbixiyey gudoomiyaha Gobalka Bari C/samad Maxamed Galan.
Akhri Kana: Hub kala duwan oo laga soo saarey God ku yaaley Qandala
Gudoomiyaha oo saxaafada kula hadlaayey dekadda weyn ee Magaalada Bosaaso ayaa sheegay inay hubkan kasoo qabteen degaanka qandala kadib markii ay maamulka degmada qandala ku soo wargeliyeen in degaankaas ay dooni kateentay hub aad u fara badan isla markaana ay gacanta ku dhigeen balse ay baxsatay doontii sidey iyo rag ajaaniib ah oo la malaynaayo inay u dhasheen dalka yemen oo doontaas hubka sidey la socdey.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in hubkaas lagu dejiyey meel u dhow degmada qandala kadibna ay arkeen dadka degaanku ayna soo wargeliyeen Maamulka degmada qandala waxaana isla markiiba goobtaas ku baxay ayuu yiri maamulka degmada kadibna gacanta ku dhigay hubkaas isagoo ku amaanay hawshaas ay dalkooda iyi dadkooda u qabteen dadka degaanka qandala iyo weliba Maamulka qandala.
Gudoomiyuhu si cad uma aanu sheegin cida sida dhabta ah loogu wadey hubkaas hase ahaate waxa uu sheegay inay samayn doonaan baaritaano balaaran oo ay arintaas ku oganayaan,balse waxa tilmaamay inay tuhmaayaan kooxo argagixiso nabadiid ah.
Taliyaha Ciidamada Badda Dawlada Puntland Col: C/risaaq Diiriye ayaa sheegay inay hubkan qabashadiisa ay qaybta ugu weyn lahaayeen dadka degaanka qandala iyo Maamulka degmada isagoo amaan duldhigay shacabkaasi iyo Maamulkooda degmada, wuxuuna balan qaaday inay ciidamada baddu gacan bir ah ku qaban doonaan cid kasta oo isku dayda inay Puntland khalkhal ka gelisa dhanka badda iyo dhan kasta oo loo baahdo.
Maahan Markii ugu horaysay oo xeebaha Gobalka bari laga soo dejiyo hub, oo ay gacanta ku dhigaan ciidamada amaanka Puntland waxay ahayd bilo ka hor markii hub fara bada laga soo qabtay degaanka Baargaal hase ahaate hubkan ayaa noqonaaya kii ugu badnaa ee ay gacanta ku dhigaan ciidamada amaanku Hubkan oo iskugu jira , Madaafiicda waaweyn,Garnaylada garabka lasaaro,Hub fudud iyo weliba wax yaabaha qarxa ee dhulka lagu aaso.
Qabashada hubkan ayaa ah caalamad muujinysa sida ay u feejigan yihiin dadweynaha reer Puntland isla markaana wada shaqayn dhow ay ula leeyihiin ciidamada amaanka Puntland iyo Maamulada degmooyinkooda, sidoo kale dhacdadan ayaa ah mid fariin dhanka amaanka xeebaha ah u diraysa dawlada Puntland ayna muujiyaan karti siyaasadeed oo ay kula soconayaan arrimahan oo kale.